Ambohidratrimo : Sarim-bavy mpanao vola sandoka tra-tehaka -
AccueilSongandinaAmbohidratrimo : Sarim-bavy mpanao vola sandoka tra-tehaka
Sarim-bavy iray izay fantatra fa tafiditra ao anatina fikambanan-jiolahy efa ikoizana no tra-tehaky ny zandary teny Ambohidratrimo ny alakamisy maraina lasa teo. Ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, dia fantatra fa lohandohan’ny mpisorona amin’ny fanaovana vola sandoka ihany koa ity olona voasambotra ity sy ny namany. Tsy iza akory io sarim-bavy voalaza io fa naman’ilay jiolahy lavon’ny zandary teny Andraharo ny alakamisy tolakandro lasa teo, izay marihina fa misy hifandraisany amin’i Elysé, ilay olon-dratsy voasambotra teny 67Ha niaraka tamin’ny basy Mat 49 sy bala maromaro andro vitsy lasa izay. Niainga tamin’ny adina am-bava ity farany mantsy no nahafantarana olona maromaro sy nahazoana ny laharana finday an’io sarim-bavy izay fantatra fa mpanome vaovao ireo namany mahakasika ny olona izay hotafihina. Nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny orinasa mikirakira ny resaka fifandraisana, ka tamin’ny alalan’izany no nahafantarana ny adiresin’ny tranony teny Ambohidratrimo. Nidina tao amin’ilay toerana voalaza avy hatrany ny zandary teny an-toerana rehefa nahazo “délégation judiciaire” avy amin’ny fitsarana, ka sarona tao tokoa ity olon-dratsy ity. Tsy niandry ela fa niroso avy hatrany tamin’ny famandrihana ireo jiolahy namany, tamin’ny alalany ireo mpitandro filaminana .
“Mody noftahana ireo namany fa misy olona mila vola sandoka maika ka nifanome fotoana teny By pass. Niova teny Andraharo indray anefa izany avy eo, ary izao niafara tamin’ny fifampitifirana izao”, hoy ny fanamarinam-baovao avy amin’ny zandarimariam-pirenena. Efa niandry tenyAndraharo avokoa noho izany ny zandary maromaro nanao fanamiana sivily. Tonga araka izay nifampiresahana teny an-toerana tokony ho tamin’ny 04 ora sy sasany tolakandro ihany koa ny roalahy nitondra kodiaran-droa ka nidina ilay lehilahy nipetraka tao aoriana hamonjy ilay sarim-bavy, izay niandry tsy lavitra teo. Tamin’izay indrindra no nahafantaran’ilay jiolahy nitondra moto ireo mpitandro filaminana nijoro teny amin’ny manodidina. Namoaka basy ary nitifitra avy hatrany ity farany no sady nitari-dositra nitsoaka, saingy tsy nahavoa ireo manam-pahefana. Nitifitra toraka izay ihany koa ilay namany izay tavela teo, araka ny loharanom-baovao hatrany, kinanjo ny balan’ireo zandary no tonga aloha ka niantefa teny aminy. Novonjena haingana tany amin’ny hopitaly moa io olon-dratsy io ahafahana manohy ny famotorana sy hahafantarana ny marina, saingy tsy tana intsony ny ainy. Rehefa natao ny fisavana azy, dia nahatrarana basy vita gasy niaraka tamin’ny bala calibre 12. Mbola nahitana rongony ihany koa teny amin’ity jiolahy lavo ity. Notazomina ao amin’ny borigadin’ny zandarimaria eny Ambohidratrimo moa io sarim-bavy io mandra-pahavitan’ny fanadihadiana alohan’ny hanolorana azy eo anatrehan’ny fampanoavana. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo, izay voalaza fa nisy mpitandro filaminana voarohirohy.